Sawiro+Faahfaahin Diyaaradaha Mareykanka Oo Duqeeyay Maleeshiyaatka Galmudug. – Bogga Calamada.com
Sawiro+Faahfaahin Diyaaradaha Mareykanka Oo Duqeeyay Maleeshiyaatka Galmudug.
September 28, 2016 12:32 pm Views: 19
Waxaa sii kordhaya khasaaraha maamulka Gaala raaca Galmudug kasoo gaartay duqeyn saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka geysteen duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug.
Diyaaradaha Nasaarada Mareykanka ayaa dhowr gantaal ku dhuftay gaadiid dagaal oo ay la socdeen maleeshiyaatka Galmudug kaasi oo marayay deegaanka Jeexdin ee Bariga magaalada Gaalkacyo.
Maamulka Ashahaado la dirirka Galmudug ayaa soo bandhigay sawiro muujinaya burburka gaadiidka dagaalka ee ay duqeeyeen diyaaradaha Mareykanka iyadoona ku dhawaad 30 askari dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen duqeyntaasi.
Saraakiil u hadashay maamulka Dowlada Itoobiya dhisatay ee Galmudug ayaa ku eedeeyay maamulka Gaala Raaca Puntland in warbixin qaldan ay siiyeen saraakiisha Mareykanka ee ku sugan dhulka uu ka arimiyo maamulka Puntland sidaana diyaaradaha Mareykanka ay ku duqeeyeen kolanyada gaadiidka ee maleeshiyaatka Galmudug.
Hoos Ka Daawo Sawirada Duqeynta Gaalkacyo.